Madaxweynaha Puntland oo Muqdisho kula kulmay safiirka Imraadka ee Soomaaliya. – Radio Daljir
Agoosto 5, 2016 1:21 b 0
Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo safar shaqo ku jooga magaalada Muqdisho ayaa xalay kulan casho sharaf ah la qaatay Danjiraha dawladda Isu tagga Imaaraadta Carabta u fadhiya dalka Soomaaliya Maxamed Al-Cutmaani.
Kulanka ayaa Madaxweynaha waxaa ku wehelinayey guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee Baarlamaanka Puntland iyo saraakiil ka tirsan Madaxtooyada Puntland, waxaana kulanka cashada lagu qabtay xarunta Safaaradda Imaadka ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha dawladda Puntland iyo danjiraha dawladda Isu tagga Imaaraadka ayaa kulankooda uga wada hadlay xaaladda guud ee dalka Soomaaliya gaar ahaan marxaladda kala guurka ah ee uu dalku ku jiro.
Danjire Maxamed Al-cutmaani ayaa ugu horrayn Madaxweynaha iyo shacabka Puntland ugu hambalyeeyey sannad-guuradii 18-aad ee kasoo wareegtey markii aas-aasay Puntland isagoona u rajeeyey in shacabka Puntland in sannadkaan sannadkiisa ay ku gaaraan guul iyo horumar.
Sidoo kale danjiruhu waxa uu ku ammaanay Madaxweynaha dawladda Puntland dedaalka ay dawladdiisu ugu jirto horumarinta iyo adkaynta nabad gelyada Puntland iyo doorka ay dawladda Puntland ka qaadatay xal u raadinta Soomaaliya.
Ugu dambayn Madaxweynaha dawladda Puntland Dr. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa Danjiraha Imaaraadka uga mahadceliyey soo dhoweyntiisa iyo casho sharafta maamuuska huwan ee uu u sameeyey, waxaana uu hoosta ka xarriiqay in ay muhim tahay in lasii xoojiyo iskaashiga saaxiibtinimo, ganacsi iyo nabad-gelyo ee ka dhexeeya dawladda Isu tagga Imaaraadka Carabta iyo dawladda Puntland.